N'ogbe Portable esi ísì ụtọ Tinyen Onyinye kandụl na eke soy wax factory na-emepụta | Mmeri
Candles na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ na-acha uhie uhie na soy wax
100% NTURAL WAX - Ejiri 100% dị ọcha soy wax. Inye onye na-ehicha ihe, nke dị ogologo na-ere ọkụ. Enweghị ọkụ na enweghị anwụrụ ọkụ ojii, ahụike, adịghị emerụ ahụ mmadụ na gburugburu ya. Nye gị ọcha dị ọcha na ogologo oge na-adịgide adịgide nke aromatic bliss.
Ha kwesịrị ekwesị maka ezumike ọ bụla ma ọ bụ mmemme pụrụ iche, dịka ụbọchị valentine, ụbọchị nne, ụbọchị ọmụmụ, ezumike, ncheta.
Kandụl aromatherapy na-ewepụ isi na-adịghị mma na isi ísì achọghị, mee ka ikuku dị ọcha ma dị ọhụrụ. Ọ dị mma maka enyemaka mgbakasị ahụ.
Size: 6.2cm (Obosara) * 5 cm (Elu)
N'ikuku ana enweta n'otutu-acha anwụrụ ọkụ ezi ọkụ Obere soy waks tin kandụl
A kandụl ndị a na-eji ọmarịcha anya, dị mma maka gị ịga ebe ọ bụla ị na-aga!
Mepụta ọnọdụ na ọnọdụ izu ike maka gị na ndị ọbịa, na-emekwa ka ọ bụrụ ezigbo onyinye maka oge ọ bụla!
Ihe kandụl kandụl mara mma, uwe maka ịchọ ụlọ gị mma ma ọ bụ chekwaa obere ihe ole ejirila.
Ọrụ nlele dị.
Ihe onwunwe Tin nwere ike + paraffin wax / soy wax + owu wick + mkpuchi ọla
Nha 6.2cm (Obosara) * 5cm (Elu)
Mkpokọta nha 95g
Nke gara aga: Efu kandụl ite maka kandụl Ndinam
Osote: Ji achọ chakra esi ísì ụtọ soy kandụl na kristal na ngwaahịa
High Quality Okpukpo Usi Ikanam
Iberibe iko ite esi ísì ụtọ kandụl na achara mkpuchi
Keedị Yankee soy wax na-esi ísì ụtọ
atọ wicks na-esi ísì ụtọ soy wax kandụl